Isiokwu nha nke Grooved Cap:
Nkọwapụta nke Grooved Cap:
Anyị na-eji Oxford Instruments spectrometer elele chemical mejupụtara nke ọ bụla okpomọkụ, mmiri eme ihe chọrọ nke usoro tupu ígwè.
Onye ọ bụla nēfe ladle agbapụtara tap on a ngọngọ, na ịme ọpịpị nnwale e rụrụ, na-ekpe ikpe na-Inoculation.
Ball mmeghachi omume mgbe chịkwara nnọọ agbapụtara oge, ga-mezue agbapụtara na 9 nkeji, jiri oge oti mkpu usoro, erie oge oti mkpu, iji gbochie a spheroidizing nlaazu onu.
Nditịm ịchịkwa size nke uzo, hụ na nnabata na ụkpụrụ.
Grooved oyiyi akwa n'elu mkpuchi epoxy resin, melite ike iguzogide corrosion.
Bara uru ka ndị na-ewu nchekwa, usoro kwụsie ike dị mma, mfe mmezi.
Onye ọ bụla oku ogbe nwere traceability.
The anwụrụ oyiyi akwa nwere outlets sitere na site 1 "site 24".
Previous: nkwụnye Flanges
Osote: Grooved concentric Reducer
ANSI BSI Cap Dabara Adaba
Igba Iron Pipe Cap
Igba Iron Pipe End Cap
Igba Iron Post Onye ndu
Igba Iron threaded Pipe Onye ndu
Cheap Nkedo Iron Cap
Cheap Nkedo Iron igbapu Pipe Fittings
Ductile Iron Cap Pipe Dabara Adaba
Ductile Iron Dabara Adaba
Wuru n'ụzọ pụrụ Grooved Cap
Female Nkedo Iron Cap
Galvanized Nkedo Iron Cap
Threaded Pipe Onye ndu
N'ogbe Grooved Cap
ductile ígwè anwụrụ oyiyi akwa hydraulics pneumatic ...
Grooved 90 Celsius n'ikpere aka
Ductile Iron Grooved Mechanical ịkụ gọlfụ FM Mankeumman Appro ...